सिक्किममा भइरहेको थियो मोर्चाको बैठकः 11 जना पक्राउः पुलिस फाइरिङमा दावा भोटियाको मृत्युः नाम्ची अस्पतालमा बङ्गाल पुलिस स्थानीयहरूको घेराउमा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसिक्किममा भइरहेको थियो मोर्चाको बैठकः 11 जना पक्राउः पुलिस फाइरिङमा दावा भोटियाको मृत्युः नाम्ची अस्पतालमा बङ्गाल पुलिस स्थानीयहरूको घेराउमा
September 1, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङः नाम्ची निकट एक रेसोर्टमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङले पार्टीको केन्द्रिय कमिटी सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाएका थिए। बैठक शुरु भइसकेको थिएन, धेरै सदस्य एवं पूर्व सभासद्हरू आइसकेकै थिएनन्, यस्तैमा अचानक बङ्गाल पुलिस र सीआईडी जवानहरूले रेसोर्टमा छापा लगायो।
छापा मारेको थाहा लाग्ने वित्तिकै मोर्चा नेताहरू भागरेभाग भए। विमल गुरूङ सही मौकामा भाग्न सफल बने तर 11 जना केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरूलाई सीआईडी र पुलिसले पक्राउ गऱ्यो। पुलिसपक्षबाट यसबारे कुनै कुरा खुलाइएको छैन। सूत्रले बताएअनुसार हेमन्त गौतम, शङ्कर अधिकारी, नन्दिता गौतम र साबित्री राई पक्राउ पर्नेहरूमध्ये हुन् भन्ने पुष्टी भएको छ।
पेदोङको धोबी खोला निवासी दावा भोटिया ( जो पूर्व सभासद् दावा शेर्पाको वाहन चालक भनिँदैछ) लाई सदामतिर भाग्दै गर्दा बङ्गाल पुलिसले गोली हान्यो। घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको दावाको शव नाम्ची अस्पताल पुऱ्याइएको थियो।
नाम्चीमा दावाको शव पुऱ्याइएको थाहा पाएपछि स्थानीय मानिसहरूले अस्पताल परिसरमा नै बङ्गाल पुलिसलाई घेराउ गरेर राखेको बताइएको छ।
उनीहरूले बङ्गाल पुलिसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूले अर्को राज्यमा पसेर यसरी सोझै गोली दाग्ने अनुमति कसले दियो भन्ने प्रश्न तेर्साएका थिए।
सिक्किम पस्ने नाकामा आज बङ्गाल पुलिसले हरेक वाहनमा खानतलासी गरेको पनि सूत्रले बताएको छ। पुलिसले खानतलासी गरेको खबर पाउनसाथ कति मोर्चा नेताहरू बाटैबाट फर्किए। यता सेभोकमा पुलिसी गस्ती तैनाथ राखिएको पनि सूत्रले बताएको छ। पक्राउ पर्नेहरूलाई सेभोकमा तैनाथ पुलिसले सिलगढी लगेको पनि सूत्रले बताएको छ।
पक्रा पर्ने 11 जनामा को को छन्, पुलिसले नाम सार्वजनिक गरेको छैन तर मोर्चाको बैठक हुने कुरा बङ्गाल पुलिस र सीआईडीलाई अघिबाट नै थाहा थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ।
केही दिन अघि विमल गुरूङले आफ्नै दलका कति नेताहरूले उनीबारे पुलिसलाई सूचना दिने गरेको थाहा लागेको खुलाएका थिए। मोर्चा सूत्रबाट थाहा लागेअनुसार आजको बैठक निक्कै गोप्य बैठक थियो। सरोकृतबाहेक अन्य कसैलाई बैठक कहाँ हुँदैछ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन।
यो घटनाले धेरैवटा प्रश्न उठाएको छ। बङ्गालको पुलिस र सीआईडीलाई सिक्किम सरकारले मोर्चाको बैठकमा नै नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिइएको थियो कि थिएन? भन्ने प्रश्न निक्कै गम्भीररूपले उठेको छ।
बङ्गाल पुलिस सूत्रले बताए अनुसार आज नै विमल गुरूङ, रोशन गिरी अनि प्रकाश गुरूङको नाममा लुकआउट नोटिश जारी गरिएको थियो।
आजको बैठक मोर्चाका नेता विनय तामाङ अनि अनित थापाले व्यक्तिगतरूपमा अनिश्चितकालीन बन्दलाई 12 दिनको राहत दिएको घोषणा गरेपछि अनि पार्टी र जातिलाई विनय-अनितले घात गरेपछि बसेको पहिलो बैठक थियो।
विनय तामाङहरूले बन्दबाट 12 दिनको राहत दिए पनि जनताले आफै सडक उत्रिएर बन्द जारी राखे। घोषणा भएर पनि बन्द जारी रहने वित्तिकै अनि जनता विनय तामाङहरूको विरुद्धमा सडक उत्रने बित्तिकै बङ्गाल पुलिसले मोर्चा नेताहरूको पक्राउ शुरु गरेको थियो। हिजो राती नै मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका सह-सचिव सुरज बागदासलाई पक्राउ गरिएको थियो।
नवान्नमा 29 अगस्तको दिन भएको बैठकमा विनय तामाङहरूलाई मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले ‘तपाईँहरूले गोर्खाल्याण्डको माग गर्नु तपाईँहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो’ भनेकी थिइन् तर सोही आन्दोलनको रणनीति तयार पार्न नाम्ची निकट रेसर्टमा बसेको बैठकमा नै मोर्चा नेताहरूको पक्राउ गर्न ममता सरकारले पुलिस पठाएर स्थितिलाई अझ गम्भीर बनाएकी छन्।
यता विनय तामाङ अनि अनित थापा बङ्गाल सरकार निकट हुनु, उनीहरूलाई पहाडबाट पूर्ण सुरक्षा दिएर पहाडबाहिर लैजानु अनि उता मोर्चाको बैठकमा नै पुगेर मोर्चा नेताहरू पक्राउ गर्नुले पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ।
यता केही दिन अघि विमल गुरूङको निर्देश बिना नै विनय तामाङले सिटोङमा 33 जना केन्द्रिय समितिका सदस्यहरूलाई लिएर बैठक गरेका थिए। बैठकमा लिइएका प्रस्तावहरू सार्वजनिक भएको छैन। यता विनय तामाङले बोलाएको सिटोङको बैठकमा जाने 33 जना केन्द्रिय समितिका सदस्यहरू कोको थिए? यसमा पनि प्रश्न उठेको छ। आजको बैठकमा ती 33 जना सदस्यहरू मध्ये को को गएका थिए भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
जुन हिसाबले मोर्चाको बैठकमा पुलिसी छापा भयो, यसले अघिबाट नै पुलिसलाई बैठकबारे सूचना गइरहेको अथवा मोर्चा नेताहरूलाई सीआईडीले पछ्याइरहेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
Post Views: 16,840
‘हामीले विरोध गरेका थियौँ, विनयले मै जिम्मेवारी लिन्छु भने’